Dianhong Gongfu shaaha jumlada leh waxaa iska leh soo -saaraha iyo alaab -qeybiye shaaha madow | Maokun
Shaaha Dianhong Gongfu wuxuu ka tirsan yahay qaybta shaaha madow
Shaaha Dianhong Gongfu wuxuu ka tirsan yahay qaybta shaaha madow. Iyada iyo Dianhong shaaha madow ee la jajabiyey ayaa inta badan lagu iibiyaa dalalka Bariga Yurub sida Ruushka iyo Poland, iyo sidoo kale in ka badan 30 dal iyo gobollada Galbeedka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Waxaa lagu iibiyaa gudaha gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalka. Cabitaannada Dianhong ayaa inta badan lagu qaso sonkor iyo caano, udugga iyo dhadhanka ka dib marka lagu daro caanaha ayaa weli xooggan. Shaaha Dianhong Gongfu waa shaah si buuxda loo qooyay oo leh dabeecad diiran. Cabbitaanku ma kicin doono caloosha waxayna u fiican tahay jirka.
Dianhong Gongfu Asal ahaan
Dianhong Gongfu waxaa inta badan laga soo saaraa Lincang, Baoshan iyo meelo kale oo Yunnan ah. Yunnan waxay ku taal xadka koonfur -galbeed ee Shiinaha. Meesha juquraafi ahaan waxay u dhexeysaa 97 ° ~ 106 ° E longitude iyo 21 ° 9 ′ ~ 29 ° 15′N loolka. Yunnan wuxuu leeyahay astaamaha cimilada roobka iyo kulaylka isla xilligaas oo qallalan oo qabow isla xilligaas. Heerkulka celceliska sanadlaha ah waxaa lagu hayaa xadka u gaarka ah 15 ° ~ 18 °, kaas oo saynisyahannadu ugu yeeraan "aagga noolaha eugenic".
Habka wax soo saarka Dianhong Gongfu
Mid, nidaamka bilowga ah
Shaaha madow ee Dian waxaa lagu farsameeyaa afar hab oo qallajin, rogid, halsano iyo qallajin caleemaha cusub ee dhirta shaaha. Habka loo dhigayo caleemo shaah oo cusub oo jilicsan oo laga soo qaaday geedka daahyo baasaboor oo hawo leh si biyaha loo kala diro ayaa la yiraahdaa qalal. Markay biyuhu lumayaan ilaa xad, caleenta shaaha ayaa noqota mid dabacsan kadibna ku dhejisa qallooc. Ku masax mashiinka si aad uga dhigto casiirka shaaha inuu jilbo oo shaaha wuxuu ka dhigaa ulo. Caleemaha shaaha ee cajiinka ah waxaa la geliyaa saxaarad alwaax ah. Heerkulka kulaylka iyo qoyaanka ku habboon, caleemaha shaaha ayaa si tartiib tartiib ah isu beddelaya casaan waxayna soo saaraan caraf tufaax ah. Wakhtigan, ku rid caleemaha shaaha qalajiyaha si aad u qallajiso oo ugu shiil Marka la budo, shaaha madow si guul leh ayaa loo sameeyaa.
Wrinking waxaa loola jeedaa geeddi -socodka caleemaha cusubi biyo u waayaan muddo, taasoo keenta in caleemo caleemo adag oo jilicsan ay noqdaan kuwo barara oo engegay. Waa habka ugu horreeya ee soo -saarka bilowga ah ee shaaha madow. Ka dib markii ay engegaan, biyaha si fiican ayaa loo uumi -bixin karaa, caleemuhu waa jilicsan yihiin, adkaysiga waa la xoojiyaa, wayna fududahay in la qaabeeyo.
Ujeeddada duubista shaaha madow waxay la mid tahay ta shaaha cagaaran. Caleemaha shaaha waxaa la sameeyaa inta lagu guda jiro geeddi -socodka duudduubka waxayna kordhiyaan midabka iyo uruurinta dhadhanka. Isla mar ahaantaana, unugyada caleenta ayaa la burburiyaa, taas oo fududeyneysa oksaydhka lagama maarmaanka u ah ficilka enzymes waxayna fududeyneysaa horumarka siman ee halsano.
Hal -abuurku waa marxalad u gaar ah soo saarista shaaha madow. Halsano ka dib, midabka caleenku wuxuu isu beddelaa cagaar ilaa cas, isagoo samaynaya sifooyinkii tayada shaaha madow, caleemo cas iyo maraq cas.
Qallajin waa habka dubista caleenta shaaha ee la qooyay heerkul aad u sarreeya si dhaqso loogu uumiyo biyaha si loo gaaro tayada iyo qallajinta.
2. La safeeyey
Hagaajinta habaynta ayaa ah kor u qaadida tayada badeecada. Dhab ahaantii waa geedi socod kala -soocid jireed iyo hab lagama maarmaan u ah shaaha si uu u yeesho sifooyin badeeco. Hawsha tiknoolajiyadda shaaha ee la safeeyey ayaa ah in la gaaro ujeeddada kala -soocidda, kala -soocidda qaabka, kala -qaybsanaanta mudnaanta, ka -saaridda liidnimada, iyo xakamaynta qoyaanka iyada oo loo marayo kala -soocidda, is -beddelka, iyo isku -darka baaritaanka, kala -qaadidda, kala -soocidda, raso isku mid ah, iyo dabka dheeraadka ah.
Hore: Bai Lin Gong Fu Hong Cha Shaa oo ay leedahay ShiinahaTea
Xiga: Jiuqu Hongmei Galbeedka Galbeedka Gongfu Shaaha Madow
Shaaha Black Dragon
Shaaha Madow ee Ingiriiska
Ctc Shaaha Madow
Quraac Ingiriis Shaah Madow
Off Shaaha Madow
Shaaha Madow ee Shiinaha Yingde Hong Cha
Shaah Madow 100% Yixing Healthy Dabiici ah ...
Jiuqu Hongmei Galbeedka Galbeedka Gongfu Shaaha Madow
Shaah Kungfu oo Organic tayo sare leh leh oo jumlad ah
Qimen Black Tea Premium Qi Hong Jinzhen 2021 Ne ...
Shaah Madoow oo Tayo Sare Leh
Lambarka 29, Wadada Guangming, Wadada Shuxi, Degmada Wuyi, Magaalada Jinhua